Ukulimala kwengqondo kunobungozi njengemvelo. Yaye nemiphumo ayibe yinto enzima. Kuphela ukuphazamiseka kwengqondo kunye neentsimbi, sivame ukukhawuleza. Siyathemba ukuba kuya kudlula ngokwalo ... Nangona kunjalo, umphefumlo womntu unokugula ixesha elide, kwaye ngamanye amaxesha sithwala ingxaki yethu engqondweni engabonakaliyo, kwaye singakhange siphume umthwalo onzima. Ngobulungisa, kufuneka ndithi akuyinto nje yokungathembeki kwintlalo yengcebiso. Iingxaki zengqondo, ngokungafani nokukhathazeka ngokwenyama, kunokuba nzima kakhulu ukuyiqonda. Asikwazi ukuqaphela oko kwenzekayo, nini na. Akukho zixhobo zokuxilonga. "Ngoko-ke, nanko ukuphazamiseka, ngokufanelekileyo kwindawo yakho yokuzithemba, kungekudala kakhulu, kodwa indala, malunga neminyaka emithathu." "Iyahambelana nomtshato wakho ngexesha." Ewe, siya kuphilisa. " Enyanisweni, ukuvavanya ubunzima beengxaki kwaye ukufumana isizathu esinyaniyo akunakwenzeka ngaso sonke isikhathi. Ewe, kukho ingcamango yemigangatho yesiganeko somcimbi. Sitsho: "Utshintsho lomsebenzi, kwaye usenokunyuka-ke uxinzelelo oluphindwe kabini," "Ukunyamekela isigulane sokulala kunzima kakhulu kwaye kunomdla." Nangona kunjalo, isisindo somnqweno asisoloko sihambelana nokuzimela. Umntu oyedwa onxamisana nomphathi uya kuba luvavanyo olunzulu, emva koko akayi kukwazi ukwenza imisebenzi yakhe, azivelele kwaye akwazi ukuthetha neqela. Kwesinye, kuya kufana nefuthe leempumelelo ezintsha kunye nokuziphuhlisa-kwaye ngaphandle kweemvakalelo ezikhethekileyo. Kuxhomekeke kubaluleka bangaphakathi kweso siganeko, uhlobo lomntu ngokwakhe kwaye, ngokuqinisekileyo, imeko yobomi jikelele. Omnye ngokupheleleyo, ekubonweni kokuqala, into engabalulekiyo ngamanye amaxesha ngokwaneleyo ukwenza umfanekiso wesiganeko ubonakale ngokwahlukileyo. Umzekelo, isitshixo. Iintsapho ezimbini ezincinci zihlala kwiimeko ezilinganayo, kunye nobudlelwane obulinganayo (obungalungile) phakathi kwentombi nomkhwekazi. Kodwa umama-mkhwenkwe unesicatshulwa kwindlu yeyona ncinane ("ngumama," kutsho umyeni), kanti enye ingenzi. Inqanaba loxinzelelo kwimpilo yomfazi ukusuka kwinani lentsapho liphezulu. Kungenxa yokuba isitshixo kuthetha ukuba umyeni akafuni ukuhlukana nomama, ukulawula kwakhe okungapheliyo, ukubusa kwaye, ngenxa yoko, ukutshatyalaliswa okuqhubekayo komalokazana. Ukuxinezeleka komfazi wentsapho yeenombolo ezimbini kubangelwa (ukungabikho kobudlelwane kunye nabazali akuyikuzisa umntu), kodwa kusenokuba yingozi. Uya kuba ngumntu osisigxina, kwaye ngoko ke kuncinci ukuba abe nefuthe elibi kumfazi oselula.
Ekuqaleni ukususela ebuntwaneni
Inani elikhulu leengqondo ze-psychotraumas sifunde ebuntwaneni, kwaye oku kuyisithintelo kunyango. Ngelo xesha sisazi ngesenzo somcimbi, senzeke iminyaka emininzi, kwaye imiphumo kunzima kakhulu ukuyiphatha. Kodwa ebuntwaneni sisengozini kakhulu, sisengozini kwaye sincike kubantu abadala. Nangona singakwazi ukuphendula ngokuthe ngqo (ukukhala, ukumemeza), kodwa ukuqonda imeko, ukuyisebenzisa ukuze kube nzima kakhulu kwaye akukho miphumo emibi kakhulu, ayikho, ayikwazi. Kulungile, kuya kubonakala, yintoni eyoyikrakra imeko apho abazali bayikhohlile umntwana kwi-kindergarten? Ngokukodwa ngenxa yokuba. Umama wayecinga ukuba utata wayethabatha, utata-ukuba unina. Ewe, umntwana wahlala apho ngeeyure ezimbalwa, kodwa kungekhona enye, kodwa ngutitshala. Nangona kunjalo, uninzi lwabantu abaliphi na ibali eliye lenzeke khumbula ukuba lililo linye lezona zinto zibi kakhulu ebomini babo. Kuhle, ukuba abazali baya kucela ukuxolisa kwaye bajikeleze umntwana ngokunyamekela kunye nokunyamekela ukujongana neengxaki. Kwaye ukuba bathi: "Kutheni unqamle umhlengikazi? Ngaba ucinga ukuba abazali abanakho ezinye iinkxalabo?" Isiva sokushiya, mhlawumbi, kulo mcimbi asiyi kuze kuphele. Ukuba ngumntu omdala, umntu akanakucinga le ngxaki. Yaye into ayayizondayo kude kube ngoku, xa umntu ephuthuma kwaye ehlela izigwenxa zangempela malunga nale nto, uhlobo lwalo ...
Yintoni okhononda ngayo?
Ubunzima bokunxibelelana, umlingani ophikisanayo, ukunyaniseka okukhulu ... Konke oku kungaba yimiphumo ye-psychotrauma. Abantu abanjalo bahlala bethetha "Ndihlala ndihlala" okanye "andizange ndize", bahluke kwiimigwebo ezingabonakaliyo nezibukhali. "Andiyi kuvumela nabani na ukuhleka nam." Kodwa ngaba kuhleka-ngaba kubi? Lo mntu - ewe. Ukuhleka ngaye kuthetha umnqweno wokuhlazisa umnxibelelwano.
Esinye isibonakaliso se-psychotrauma sisabela kwi-psychosomatic. Ngokomzekelo, xa kunzima ukuphefumula, umntu uhlambalaza, agubuke, aguqulwe. Kwaye oku kunokukunokuba nefuthe elibuthathaka. Yiyo nje imeko ephazamisayo kwaye umzimba uphendula ngokubuhlungu ngokuphindaphindiweyo. Ukukhathazeka, ukwesaba, amava amaninzi kwiindawo ezingenanto, ukulungiswa kwiingxaki ... Kamuva ukulala, ukuphathwa kwentloko, ukuphazamiseka kwesisu, intlungu entliziyweni yongezwa.
Ngomdla okwaneleyo kwengqondo, umnqweno wokuziqonda, umntu unokukwazi ukujamelana neengxaki zakhe. Nangona kunjalo, ukuba kukho injongo yokubuyela kwiingcali, kuyafaneleka ukukhumbula engqondweni:
Ngona i-psychologist best psychologist / psychotherapist ayinakunceda xa isigulane singafiki kuye sisodwa, kodwa ngaphantsi kwengcinezelo (umama wamfumana isazi sengqondo, ngenxa yokuba akanalo amandla okubukela intombi yakhe ihlupheke; intombi yam yacebisa ukuba ndiphendule kwiingcali);
Ingcali kufuneka ikhethe, ingagxininisekanga kuphela kwiinkonzo zakhe kwintsimi yakhe, isantya sobungqina, ingxelo, kodwa nangomdla. Unxibelelwano kufuneka lukhululekile, lube lula kwaye luzolile - kusadingeka luthethe malunga nomntu;
ukususela ngowokuqala kangcono (ukuze uyisuse) ngeke. I-Psychology ayiyiyo imilingo, kwaye izazi zeengqondo azitshintshi i-wand magic, ziqhube zonke iinjongo ngaphandle kokuhamba, kodwa zincede umntu asebenze ngokwabo kwaye afune iindlela zokusombulula ingxaki.
Ukutshaya kweengxaki zengqondo
Kuya kuba lukhohlisi ukucinga ukuba nayiphina i-psychotrauma, kunye nokukhathazeka ngokomzimba, uphiliswa. Kwaye awona magqirha aphezulu angayi kubuyiselwa ingalo okanye umlenze olahlekileyo. Ngoko i-psychotherapists engcono kakhulu abayi kukwazi ukubuyisela ubomi obudala kwimo apho yayingaphambi kwezinto ezininzi ezenzeka. Kungokufunda ukuhlala kwiimeko ezintsha, ukwamukela ilahleko, ukuphoxeka. Abantu abasinda ekuhlaselweni kwamaphekula, ubundlobongela, abayi kuze kubekho ngaphambili. Ukutshintsha inkqubo yexabiso, imibono ebomini, bayonwabile kwaye kwezinye iimeko badidekile. Ngethamsanqa, ininzi ye-psychotrauma ayinamandla kakhulu, kwaye impumelelo yonyango lwawo incike ekuphatheni okufanelekileyo. Ukuziphathisa ngeli xesha kufuneka uqaphele, ngokukhawuleza, ngovelwano. Yakha indawo enhle, ulungiselele ieholide, mhlawumbi uthenge into edala ephuphayo.
Yona yimeko ebangela ukuxhatshazwa, kufuneka ithathelwe ingqalelo kwiindawo zonke. Fumana kuyo ubuncinane into enhle ("kodwa ingaba nzima nakakhulu"), ukucinga ukuba kuyakunceda ukukhupha kuyo. Oku kunciphisa kakhulu imiphumo, kuba "ukuxubusha" akubandakanyi ukuvakalelwa ngokweqile, kwenza kube lula ukujonga oko kwenzekayo ngaphandle. Kunzima xa ingxaki ingekadlulileyo, kodwa ngoku. Ukuba umntu unyanzelekile ukuba aphile kwiimeko ezimlimazayo, ngoko ke kufuneka ufunde ukuhlala kude. Yaye ke, ngokuqhelekileyo kunokwenzeka ukuba kukho ikusasa eliza kutshintsha konke okuza kuguqulwa.
Xa umama engumgcini wesondlo esikhulu kwintsapho
Indlela yokubeka iinjongo kwaye uphumelele
Indlela yokufunda indlela yokubonisa iingcamango zakho ngokuchanekileyo?
Ngaba amantombazana anjengabantu abadala?
Ukuzimela phakathi kwendoda nomfazi
Isaladi ye "Candelabrum"
Ubunzima beenyawo ezininzi kubafazi
Funda uhlobo lomlomo kubasetyhini nakumadoda
Kutheni abantu beemifuno bazijonga ngokwabo ngokomoya?
I-Recipe yeTruffle yeTrocolate
Ziziphi izilwanyana ezifanelekileyo kwi-horoscope
Indlela yokuziphatha xa uphula i-thermometer ye-mercury
Isitayela "sesibhendi": yintoni enokugqoka iibhothi kule nkwenkwezi
Abantwana kwiibhuthi: izihlangu zezingane ezinokwakheka kakhulu kwi-2016
I-mousse ye-chocolate kwi-persimmons
Ukuba indoda ayiyithandi umfazi wayo: 8 imiqondiso
Iifutshane ezimfutshane malunga neentwasahlobo ezineempendulo - kubafundi abasebancinaneni abane-3-4 kunye nabafundi besikolo 1, 2, iiklasi ezi-3 - Iimzekelo zemigqomo epholileyo kunye neyinkimbinkimbi malunga nentwasahlobo yabantwana